Shiinaha oo sare u qaaday xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Shiinaha oo sare u qaaday xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya
Shiinaha oo sare u qaaday xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya
Shiinaha ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay meel sare gaarsiiyaan xiriirka ay la leeyihiin dalka Soomaaliya, sida uu sheegay Wasiir Dibadeedka dalkaasi, Wang Yi.Wang ayaa warkan sheegay mar uu telefoonka kula sheekaystay dhiggiisa Soomaaliya, Amb. Axmed Ciise Cawad, iyadoo uu Shiine ka mid ahaa dalalkii ugu horreeyey ee Soomaaliya aqoonsada, halka ay Soomaaliya ahayd dalkii ugu horreeyey Bariga Afrika ee xiriir diblomaasiyadeed la yeesha.
Wang ayaa sheegay in labada dal ay isula dhaqmaan si ay xushmadi ku jirto oo siman, iyagoo wadaaga is faham ku aaddan danaha asaasiga ah ee uu midkoodba leeyahay.
Wuxuu sheegay in Soomaaliya ay Shiinaha la tahay saaxiib la aamini karo iyo walaal, isla markaana ay xubin ka tahay madlaha Iskaashiga China-Africa, kan Carabta iyo Shiinaha iyo hindisaha cusub ee Belt and Road Initiative.
Wuxuu intaa raaciyey in Shiinuhu uu ku taageersan yahay Soomaaliya inay ku dhaqanto siyaasad mideysan, sidaa darteedna ay iyagu taageeraan ilaalinta midnimada Soomaaliya oo xiriir 60 sano jir ah la lahayd dalkiisa.
Wasiir Dibadeedka Soomaaliya ayaa isna sheegay in ay Soomaaliya diyaar u tahay inay si dhow ula shaqeeyso Shiinaha si loo xoojiyo iskaashiyada dhinacyada kaabayaasha, dhaqanka iyo dad is dhaafsiga, si loo wanaajiyo xiriirka labada dal.
Si kastaba marka warka amaanta ah laga soo tago ma jiraan wax muuqda oo uu Shiinuhu ilaa haatan ballan qaaday inuu Soomaaliya ka qabanayo dhanka dib u dhiska iyo xoojinta hay’aadka dowladeed.